Wasiirkii Hore ee Isgaadhsiinta Xukuumadii Malez Zenawi ee Ethiopia oo Ka Hadlay Wada Xaajoodka Somalida | Baligubadlemedia.com
Wasiirkii Hore ee Isgaadhsiinta Xukuumadii Malez Zenawi ee Ethiopia oo Ka Hadlay Wada Xaajoodka Somalida
June 16, 2020 - Written by admin
Inta aanu Heshiisiin, ha soo barto in ay laba wadan kala ahaayeen Somaliland iyo Soomaaliya, Abiye Ahmed aqoon uma laha Taariikhda Somaliland hadaan weydiiyo diyaaradda badhtamaha Hargeisa,kuuma sheegi karo,sababta oo ah aqoonba uma laha.
Wasiirka hore Wasaarada Isgaadhsiinta ee Xukuumadii Males Zenawi Getachew Reda Ahna Afhayeenka Xisbiga TPLF ayaa ka hadlay Wadahadaladii ku dhex maray Jabuuti Somaliland iyo Soomaaliya.
Getachew Reda oo ay Waraysatay Qaybta afka Amxaariga ee Idaacada ( VOA Amharic ) ayaa waxa wax laga waydiiyay sababta Xukuumadii Melez Zenawi ee uu ka tirsanaa u dhex dhexdhexaadin waday Somaliland iyo Somaliya,
Getachew Reda oo ka jawaabaya su’aashaas ayaa waxa uu yidhi”Itoobiya waxa Ra’iisal Wasaare ka ah nin aad u degdegaya oo khatar galinaya nabadda Itoobiya iyo wadamada dariskeeda ah.Waxa ka jira qalalaase siyaasadeed gudaha Itoobiya. Waana taas sababta ay isku casishay Afhayeenka Golaha Federaalka Itoobiya Keria Ibrahim”.
Abiye Ahmed inta aanu dhexgalin Somaliland iyo Somalia waa in uu usoo jeestaa waaqica ka jira gudaha Itoobiya,iyada oo qalaalaasaha ay ku sii fideen gobolada gudaha Itoobiya taas oo ay sabab u tahay doorashooyinka uu dib u dhigay.
Somaliland waxa ay ka qaadatay xoriyadda Ingariiska,Somaliyana July 1,1960,kooxda Ingariiska uu maamulaayay ayaa la midoobay kooxdii uu Talyaaniga maamulaayay.Halgan dheer ka dib May 18,1991,qaybta uu maamulaayay Ingariiska ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay dib uga noqdeen midnimadii ay la galeen Somalia, markaas aniga waxa aan joogay Addis Ababa.
Waxa kale oo uu Sheegay in Siyaasadii Xukuumadii Males Zenawi ay ahayd in aan loo Baahnan Heshiis dhex mara Somaliland iyo Soomaaliya”Siyaasadda Ra’iisal Wasaarihii hore Meles Zenawi ayaa ahayd in aan loo baahnayn heshiis dhex mara Somaliland iyo Somalia,hadii Somaliland uu aqoonsado iyada ayaa taqaana luqadda lagaga hadlo Muqdisho,iyada ayaana heshiis dhex dhigi lahayd kooxaha iyo argagaxisada ku nool Somaliya”.
“Marba hadii aanay rabin in ay dib ula midoob-
aan Somaliya,markaas ma jirto sabab aan u heshiisiinayno Somaliland iyo Somalia,laakiin waxa aan kor u qaadnay xidhiidhka Itoobiya iyo Somaliland oo hadda hadii aan runta kuu sheego uu Ra’iisal Wasaarahan uu dhulka dhigay xidhiidhkaas,”.
Waxa kale oo uu Ato Meles Zenawi u sheegay Safaaradda Maraykanka in ay Somaliland u baahantahay furdaamin ku salaysan ka jawaabista codsiga shacabka Somaliland, waxana jiray qorshe uu ku doonaayay Melez Zenawi in Somaliland ay noqoto wadan dariskeena ah,go’aamada aan wadnay ayaa waxa hakiyey markaas xanuuno la soo gudboonaaday Raysal Wasaare Zenawi.
Waxa jirta in Raysal Wasaaraha Abiye Ahmed aanu Taariikhda Somaliland aqoonba u lahayn Maanta hadaan weydiiyo waa maxay diyaaradda taala badhtamaha Hargeisa,kuuma sheegi karo,sababta oo ah aqoonba uma laha Somaliland.
Markaas sidee baa nin aan aqoonba u lahayn Somaliland,moodayana sida gobolka Tigre ama gobolka Oramiya ama Gobolka Amara uu u heshiisiin karaa Somaliland iyo Somalia?